It ဆိုင်ရာစာအုပ်များကို အလွန်ချိုသာသောေ— MYSTERY ZILLION
It ဆိုင်ရာစာအုပ်များကို အလွန်ချိုသာသော ေ
June 2010 edited June 2010 in Book Sale
ဝယ်ရခက်၊ ရှာရခက်ပြီး ရှာတွေ့ပါက မြန်မာငွေ 40000ကျပ်မှ 80000ကျပ် လောက် အထိရှိသော နိူင်ငံခြား စာအုပ်များကို ထောင်ဂဏာန်း လောက်ဖြင့် ဝယ်ယူနိူင်ပြီ။
လက်ရှိ ဝယ်ယူရရှိ နိူင်ပြီဖြစ်သော စာအုပ်များ .....
MCTS 70-680 Configuring Windows 7
Networking - A Beginner's Guide (5th Edition)
Windows Server 2008 - A Beginner's Guide
Windows Server 2008 - Administration
Exchange Server 2007 - A Beginner's Guide
Laptop for Dummies, 2nd Edition
Hacking for Dummies, 3rd Edition (2010)
Networking for Dummies, 9th Edition (2010)
Wireless All-In-One for Dummies (2010)
Nerbooks for Dummies (2010)
Windows7for Dummies, Quick Reference (2009)
နောက်ထပ် အသစ်ရောက်မည့် စာအုပ်များ
Visual C# 2010 Step By Step (Microsoft Press)
Visual Basic 2010 Step By Step (Microsoft Press)
ASP.net4Step By Step (Microsoft Press)
MCITP Self-Paced Training Kit Exam 70-685 Windows7Enterprise Desktop Support Technician - Microsoft Press (2010)
MCTS Exam 70-640 Configuring Windows Server 2008 Active Directory (MS Press)
MCTS Exam 70-642 Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure (MS Press)
MCITP Self Paced Training Kit Exam 70-646 Windows Server Administration (MS Press)
လက်ရှိတွင် စာအုပ်များကို ပန်းဆိုးတန်းရှိ "အင်းဝစာအုပ်ဆိုင်" တွင် ဝယ်ယူနိူင်ပါပြီ။
kaunglaymaetuu wrote: »
မန္တလေးက အင်းဝမှာ သွားမေးကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာ ရန်ကုန်မှာရှိရင် မန္တလေးမှာမရောက်သေးလည်း နာမည်ပြောပြီး မှာခိုင်းလို့ရပါတယ် isbn ပြောပြီးမှာခိုင်းရင်လည်း ရပါတယ်ဗျ နည်းနည်းတော့ စောင့်ရတာပေါ့ဗျာ။
HI!! Is there any Exchange server 2003 guide book?
မန္တလေးမှာ ဝယ်လို့ရအောင် စီစဉ်နေပါတယ်၊ လောလောဆယ် ရန်ကုန်မှာတောင် ပန်းဆိုးတန်းက အင်းဝမှာပဲ တင်ထားပေးနိူင်သေးလို့ပါ။ နောက်ပိုင်း ရန်ကုန်ရှိ အင်းဝဆိုင်များအားလုံးကို တင်ပါမယ်။ ပြီးရင် ရန်ကုန်ရှိ စာပေလောကဆိုင်များမှာ တင်ပါမယ်။
အဲဒါတွေပြီးရင် မန္တလေးဘက်မှာပါရအောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးပါမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် Original မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမှာ ပြန်ထုတ်တာပါ။ Original လိုချင်ရင်မှာပေးပါတယ်။ တစ်အုပ်ကိုတော့ Original တို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ပေးရမှာပါ။ ခန့်မှန်းခြေ ၄၀၀၀၀ ကျပ်အထက် မှာရှိပါလိမ့်မယ်။ ကိုလူပျိုသိပါတယ် အဲဒီအကြောင်း။
အခုစာအုပ်တွေက Original မဟုတ်ပေမယ့် စာတွေကတော့ Original ပါ။ စာရွက်သားကွာသွားတာပဲ ကွာပါတယ်။
phoenixboy wrote: »
ရှိပါတယ်၊ လောလောဆယ် မထုတ်ရသေးလို့ပါ။ ထုတ်ပြီးသားတွေကို ဒီမှာ ဆက်လက်ပြီးတင်သွားပေးပါမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။